Meesha ay yaalliin Matxafka Best In Europe | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > Meesha ay yaalliin Matxafka Best In Europe
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 27/11/2020)
Haddii aad u yaabsan meesha laga helayo matxafyada ugu fiican Yurub, waxaan kugu daboolay! Haddii ay tahay tahay, qaran, ama dabiici ah taariikhda, matxafyada ka our liiska ma uu taag darnaan doono inay idin yaabiyo.
Waa maxay more, aad gaari kartid, kuwaas oo dhan Meelaha tareen haddii aad raadinayso hab la awoodi karo ee safarka. Ina keena aynu eegno dhow ee matxafyada ugu fiican Yurub iyo meesha aad ka heli:
Louvre museum, Paris, Faransiiska
Louvre The laga yaabaa in mid ka mid ah matxafyada ugu caansan Yurub iyo adduunka. Waa weyn, daboolaya aag ka mid ah 72,735 mitir afar gees. Tani museum cajiib ah waxay hoy u tahay in ka badan 35,000 Alaabta iyo waa mid ka mid ah calaamadaha of Paris. Aad leedahay si aad u booqato haddii aad u safraan Paris tareen!
Venaria Reale, Turin, Talyaaniga
Magaca boqorka ka yimaadaa Latin ah ugaadhsiga boqornimada waa, taasoo la micno ah "ugaarsi boqornimada". Qarniyadii 17aad iyo 18aad, waxay ahayd saldhig u ah sahamo ugaarsiga oo ka mid ah Duke Charles Emmanuel II. Haddaba madaxtooyada enchants martida casri ah quruxdiisa Baroque-style. Waxaad ma seegi kartaa haddii aad ka heli naftaada ku Turin.
Milan in ay Tareenadu Turin
Lake Como in Tareenadu Turin
Genoa si ay Tareenadu Turin
Parma in ay Tareenadu Turin
Museum The by Stream ah, Antwerp, Belgium
Museum The by Stream ama maadama waa museum weyn Antwerp. Haddii aad raadinayso a dusha view, waxaa jira lacag la'aan ah helitaanka warami matxafka. adag ee maadama ay sidoo kale leedahay makhaayad iyo cafe ah u hoos. museum laftiisa waa jecel yahay, oo booqo haddii aad ku jirtid Antwerp.
Kitaabka Qudduuska ah, Amsterdam, Holland
museum kale ee Nederlaan, ah museum kitaabiga ah waxa uu ku yaalaa Amsterdam. Waa mid ka mid ah matxafyada ugu fiican Yurub haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan Kitaabka Quduuska ah wax ku bartaan. Booqashada Bijbels ka caawisaa inay fahmaan muhiimadda iyo saamaynta Kitaabka Quduuska ah oo ku saabsan bulshada Holland. Waxaa shaki la'aan waa museum gaar ah, iyo sidoo kale-ku haboon kuwa jecel diinta taariikhda.
Kunsthistorisches Museum, Vienna, Awstariya
Kunsthistorisches Museum waa matxafka-wanaagsan ee loo yaqaan tahay in Awstariya, sidoo kale loo yaqaan Museum of Fine Arts. Qaar ka mid ah qaab ay ugu caansan waxaa ka mid ah shuqullada Rembrandt, Michelangelo, Raphael, iyo Rubens. Waxay ku noqotay wax lala yaabo fanka caashaqsan farshaxan qurux badan tan iyo furitaankiisii 1891. Qof kasta oo booqanaya Vienna tareen waa inuu sameeyaa qabanqaabo si loo arko Matxafka Kunsthistorisches.
MACHmit Children Museum, Berlin, Jarmalka
Dadka socdaalaya la kids, waxa aanu ka heli wax kasta oo wanaagsan yahay MACHmit Children Museum Jarmalka. Haddii aad ku jirto Berlin, xaqiiji si aad u hubiso soo baxay MACHmit iyo kala duwan soo jiidashada. Waxay ku haboon ee dadka waaweyn waa sida si fiican u, hawlo badan oo xiiso leh sida shaybaarka farshaxan, workshop print, iyo midii fuulitaanka.
Skansen Open Air-Museum, Stockholm, Iswiidhan
Skansen museum u furan-hawada ahaa kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee Sweden. Waxaa ka furmay 1891 oo uu ku koray si ay u noqon museum ugu caansan ee Stockholm. Muuqaal qurux badan ka Royal Djurgården waa gunno si Skansen booqanaya. Oo kuwa jecel arkaya xoolaha Scandinavia-hooyo, waxaa jira xero xayawaan taas oo soo bandhigaysa.
The matxafyada ugu fiican Yurub ayaa sugaya kuu. Haddii aad diyaar u yihiin in ay tagaan, jartaan tikidhka tareenka aad hadda oo wuxuu ku raaxaysan safarka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-museums-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#matxafyada	#safarro	europetravel	eurotrip	madxaf	safarka	safarrada	safarka Faransiiska	safarro badan	safarada	safarrada